TCDD 7. Famonosana fikosoham-bary amin'ny fitsangatsanganana isan-karazany any amin'ireo Distrika faritra | RayHaber
HomeAuctionsTENDER RESULTSTCDD 7. Famonosana fikosoham-bary isan-karazany amin'ny faritra faritra
2019 / 372131 an'ny Tiorka an'ny Railway State Tiorka (TCDD) miaraka amin'ny salan'ny 1.643.983,79 TL sy TCDD 2.593.284,61 miaraka amin'ny vidiny 7 TL. Ny orinasa 8 dia nandefa ny volavolan-kaody ho an'ny malemy ny Coins Coating amin'ny Fitaovana isan-karazany any amin'ny faritra isam-paritra ary MEHMET ŞERAFETTİN PEHLİVAN + ABBAS wonZKAN nahazo ny volavolan-dalàna tamin'ny tolotra 1.666.371,65 TL nomena araka ny valin'ny tsy azo antoka. Ny orinasa 4, izay nandray anjara tamin'ny malemy, dia nandefa tolo-bidy ambanin'ny sandan'ny fetra.
Auction, 2,3,4,5 ary 7. Tafiditra ao ny asan'ny 5119,96 Metretule Rubber Coating amin'ny Lakandrano isan-karazany ao amin'ny Birao Distrika. Ny faharetan'ny asa dia 450 (dimam-polo amby efa-jato) andro alimanaka hatramin'ny daty nanaterana azy.